Redmi K30 waxaa la soo bandhigi doonaa sanadka soo socda | Androidsis
Pablo sanchez | | Mobiles, Xiaomi
In kasta oo xaqiiqda ah in lix bilood ka hor K20 la soo bandhigay, wararka xanta ah ee ku saabsan Redmi K30 ma joojinayaan imaanshahooda. Noocani cusub ee nooca ah imaan lahaa 5G buuxa, wax muhiim ah hadda in shabakadaha 5G ay ka socdaan kana shaqeynayaan Shiinaha. Waxaa jiray warar xan iyo xogo badan, oo la sheegay in soo bandhigidiisu ay lahaan lahayd ka hor dhamaadka sanadkan.
Waxay ku khasbanaadeen inay iska horkeenaan wararkaas xanta ah ee shirkadda lafteeda. Waxay ahayd Lu Weibing muuqaalkiisa shabakadda bulshada Shiinaha ee Weibo kaasoo xaqiiq muhiim ah ka bixiyay Redmi K30. Ma noqon doonto sanadkan marka taleefanka ama taleefannada la soo bandhigo. Waxay si rasmi ah u shaqeyn doonaan sanadka 2020.
Baaxadani waxay ballanqaadeysaa inay muhiim u tahay soo saaraha. Redmi waxay dooneysaa inay noqoto mid ka mid ah sumadaha tixraaca ee 5G iyo inay heyso buugga taleefannada iswaafajiya, gaar ahaan Shiinaha. Xilligan dhexdiisa, moodooyinka sida Redmi K30 ayaa door muhiim ah ka ciyaari kara oo ka caawin kara iibka sarreeya.
Dhowr warbaahin oo Aasiya ka tirsan ayaa sheegta taleefankan Waxay noqon doontaa kii ugu horreeyay ee 5G ay shirkaddu bilaabi doonto 2020. Ha iloobin in dhowr toddobaad ka hor Xiaomi uu faallo ka bixiyay taas 2020 waxaa jiri lahaa taleefano badan oo 5G ah qaybtooda.
Redmi K30 wuxuu ku imaan karaa laba nooc, sida sanadkaan, oo leh qaab caadi ah iyo Pro. Hubaal ka faa ideyso processor-rada cusub ee Qualcomm loogu talagalay dhamaadka-sare (Snapdragon 865) iyo qiimaha dhexdhexaadka ah (Snapdragon 720). Qaar ka mid ah processor-yada si rasmi ah loo soo bandhigi doono bisha Diseembar.
Toddobaadyadu markay socdaan, xog cusub ayaa iman doonta oo ku saabsan Redmi K30, oo noqon doonta tilifoon tixraac ku qoran buugga 2020 ee sumadda Shiinaha. Wax xog ah lagama bixin goorma ayay soo bandhigiddani noqonaysaa, haddii ay dhici doonto bilaha ugu horreeya ee 2020 waa shaki weyn illaa iyo hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi K30 ayaa la bilaabi doonaa sanadka soo socda